यी युवती को हुन् ? जो सामाजिक संजालमा सर्बाधिक खोजी गरेको छन (तस्विरसहित) «
यी युवती को हुन् ? जो सामाजिक संजालमा सर्बाधिक खोजी गरेको छन (तस्विरसहित)
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७६, मंगलवार १५:०९
सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा केहि कुरा पोस्ट गरेको क्षणभर मै भाइरल हुने गर्दछ । यस्तै एक युवतीको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । विशेष गरि नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले यसलाई चासोका साथ हेरेका छन ।
नेपाली मंगोल मुलकी जस्ती देखिने यी युवतीको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ । ति युवती वास्तवमा नेपाली नभएर म्यानमारकि एक मोडेल तथा नायिका मेपन्चि हुन् । जसको अनुहार नेपाली मंगोल समुदायका युवती जस्तै छ । उनलाई नेपाली कलाकार भन्दै केहि फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाईक बढाउन उनको तस्बिरहरु दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । उनको नाममा थुप्रै नेपाली आईडिहरु खोलिएका छन् ।
कत्ति त नेपाली नै भनेर झुक्किने गरेका छन । मेपन्चिको वास्तविक नाम भने मे पन्चि सो नायुङ हो । उनको बुवा उ सो नायुङले मेपन्चिको नाम परिवर्तन गर्दै मेपन्चिमात्र राखे जस्तो वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो । युवा अवस्थामा सबैले आफ्नो जिवनको भविष्य र एउटा बोकेका हुन्छन् । कसैले सपना पुरा गर्छन् त कोहि सपना पुरा गर्न चुक्छन् । मेपन्चिको सपना भने कलाकार र पेन्टर बन्नु थियो । त्यसैले उनका बुवाले उनको नाम परिवर्तन गरेका थिए । मेपन्चि पेन्टर पनि हुन् । उनले कमेडि फिल्ममा अभिनय समेत गरेकि छिन् ।
हाल सामाजिक संजालमा भाइरल भएका उनका तस्बिरहरुहेर्नुहोस :